प्रहरीलाई बसपार्कमा लाश भेटिएपछि खबर, अनी जे भयो त्यो थप रहस्यमय छ — SuchanaKendra.Com
प्रहरीलाई बसपार्कमा लाश भेटिएपछि खबर, अनी जे भयो त्यो थप रहस्यमय छ
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित बसपार्कमा लाश भेटिएपछि स्थानीयवासीले आज बिहान प्रहरीलाई खबर गरे । लाश कम्बल ओढाएर राखिएको थियो ।
स्थानीयवासीको सूचना पाउनेबित्तिकै प्रहरी त्यहाँ पुग्यो । कम्बलले ढाकेको लाश त्यहाँ कसरी आइपुग्यो ? कसले छोड्यो ? कहाँ लगिँदै थियो र कस्तो खालको बिरामी थियो ? भन्ने कुरा प्रहरीले खोजी ग¥यो । प्रहरीले खोजी गर्दा मृतकसँगै भारतबाट आएका दुईजनालाई भेट्यो । उनीहरु गुराँस गाउँपालिका–२ दैलेखका रहेछन् ।
राति कतिबजेतिर सुर्खेत पु¥याएर एम्बुलेन्सले छोड्यो र फिर्ता भयो त्यो स्पष्ट जानकारी नभएको प्रहरी निरीक्षक रायमाझीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मृतकको विषयमा गुराँस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई खबर गरिएको छ । नेपालीको लाशलाई लाशवाहन व्यवस्था गरेर दैलेख पठाउन थालिएको उहाँको भनाइ छ ।